Amniga, Nabdoonaanta iyo Asturnaanta Bannaanka Dibedda & Waxa loo Raadinayo
Badbaadinta Bangiga Ammaanka & Ammaanka
Bangiga bangiga wuxuu u eg yahay fikrad kaliya loogu talagalay dadka taajiriinta ah. Runtu waxay tahay inay ka amni iyo fududahay sida celcelis ahaan qofka aaminsan inuu sidaas yahay. Marka waa maxay wax ka qabashada bangiyo shisheeye oo dadka u soo jiitaa? Hagaag, markii aad daraasad ku sameyso jawaabta waxaad ogaan doontaa inuusan u dhib badneyn sida aad u maleyneyso. Xisaabaadka bangiga ee dibedda waxaa laga helaa faa iidooyin badan xagga bangiyada gudaha. Bangiyo badan oo ka baxsan xeebta ayaa bixiya nabadgelyo, kalsooni kororsi iyo xorriyadda maaliyadeed iyo dabacsanaan ka badan tan bangiyada kale. Kheyraadkan waxtarka leh wuxuu ku siin doonaa talo bixinno, tusaalooyin iyo aragtiyo ku saabsan fursadan.
Bangiyo shisheeye waa sida ay hadalka u dhigayaan. Waa bangi ku yaal machadka deebaajiga ee ku yaal meel ka baxsan waddanka uu deggan yahay dhigaha. Baanka shisheeye kuma koobna oo keliya dalal yaryar sida Belize, Caymans, iyo Qubrus. Waxa kale oo ku jira dalal ay ka mid yihiin Shiinaha iyo waddamada reer Yurub, oo ay ku jiraan Switzerland, Netherlands, iyo Beljamka iyo qaar kale. Waddan kastaa wuxuu leeyahay qawaaniin u gaar ah oo xukuma sida bangiyadoodu u shaqeeyaan. Laakiin aakhirka waxay u muuqdaan inay dhammaystiraan waxyaabo aad u la mid ah. Tan waxaa ka mid ah jawi sharciyeyn ah oo ka caawiya caymiska amniga iyo amniga bangiga. Intaas waxaa sii dheer, waxay adeegsadaan nidaam taxaddar leh si ay gacan uga geystaan ​​in la sii wado dadka xun.
Maxay tahay Bank Offshore?
Marka bangi ka baxsan dalkaaga hooyo runti ma ku siinayaa wax faa iido ah?
Jawaabta su'aashu waa haa, waxaa jira faa iidooyin badan oo ku saabsan furitaanka akoon bangi meel ka baxsan. Mid ka mid ah faa'iidooyinka ugu muhiimsan uguna qiimeynta badan ee laga helo bangiyada badaha ayaa ah asturnaanta. Dalka Mareykanka, tusaale ahaan, waxaa jira sharciyo sida Sharciga Sirta ee Bankiga Mareykanka ee 1970. Mar dambe ayaa yimid Sharciga US PATRIOT. Waxay ka dhigaan aqoonsiga dhammaan dadka leh akoonka bangiga gudaha si aad u sahlan looga heli karo. Taasi waxay ka dhigaysaa asturnaanta bangiyada ee bangiyada maxalliga ah inay ku dhowdahay mid aan jirin.
Xeerarka bangiga ee waddamada badankood, marka loo eego, hayso gaarka ah ee akoonnadooda ku leeyihiin tixgelinta ugu sareysa. Markaa, bangiyo shisheeye oo ku yaal dhulal badan oo sharciga ah kuma jiraan wax waajib ah inay ku wareejiyaan aqoonsiga qofka leh akoonka dhinacyada saddexaad. Waxaa jira waxyaabo gaar ah oo laga reebo, dabcan, sida arrimaha dambiyada culus sida argaggixisada, tahriibinta, ama lacagta la dhaqay. Heerkan qarsoodiga ee bangiyo shisheeye kaliya maahan heerka warshadaha. Laakiin waxaa jira sharciyo badan oo ka mid ah waddammada ku waajibinaya waajibaadka qarsoodiga iyo qarsoodiga dadka leh akoontiga. Tani waxay ku habboon tahay dadka iyagu leh hantidooda ay jecel yihiin inay ka ilaaliyaan dacwadda madaniga ah.
Bangiga Dhexe ee Badbaadinta Dacwada
Marka loo eego Ururka Barlamaanka Mareykanka ee 2006 Mareykanka wuxuu hoy u ahaa in ka badan hal milyan oo qareeno ah. Waxaa intaa dheer, dacwadaha madaniga ah ayaa kordhay 12% laga bilaabo 1993-2002. Maanta, Mareykanka wuxuu leeyahay qareennada adduunka ugu badan. Gaar ahaan, 80% qareennada adduunka ayaa ku dhaqma gudaha Mareykanka. Waxay kaloo leedahay inta badan dacwooyinkeeda. Dhab ahaan Maraykanku wuxuu heystaa 96% ee dacwadaha aduunka. Qaar badan oo ka mid ah waa wax aan caadi ahayn. Tani waa inay ilaaliso hantidaada mudnaanta.
Sida dad badani ogyihiin, dacwad sharci darro ah, xitaa haddii ay tahay mid been abuur ah, waxay si xun u dhaawici kartaa wanaagga dhaqaale ee qofka. Tani waa kiiska haddii dacwadda lagu guuleysto iyo in kale. Khidmadaha sharciga ah ee mid loo baahan yahay inuu difaaco dacwadda ayaa noqon kara mid weyn. Natiijo ahaan, badanaa waa ka raqiisan tahay inaad dacwoodaha u tuurto dacwad-oogaha si dacwadda looga baxo. Markaad hantidaada dhigatid akoon bangiyo xeebeed waxaad naftaada ka ilaalinaysaa qareenada xunxun iyo dacwadaha khiyaamada ah. Tan waxaa ugu wacan maahan oo kaliya hantidaadu inay leedahay xukun ka duwan kan aad ku nooshahay. Laakiin shuruucda asturnaanta si adag oo adag ayaa xukuma bangiyada.
Ilaalinta Wixii Aad Tahay
Heerka ilaalinta hantida iyo asturnaanta ee akoonnada bangi ee bannaanka ay bixiyaan ayaa gaar ahaan muhiim ah. Tani wax weyn ayey ku tahay milkiilayaasha ganacsiga ee doonaya inay ilaaliyaan waxyaabaha ay kasbadeen. Waxaa jira isku dhaf ah asturnaanta bangiyada oo adag iyo haysashada hanti hoos timaad sharciga sharciga oo ay adagtahay in la gaaro. Labadan caqabadood waxay niyad jabinayaan qareeno badan oo raadinaya dacwado kaa dhan ah. Tan waxaa ugu wacan dhibaatada aad u ba'an ee helitaanka "degsiimaha mushaharka."
Waxaa muhiim ah in la ogaado in ilaalinta hantida aan lagu gaari karin oo keliya koontada bannaanka. Sababta ayaa ah tan. Haddii aad akoon ahaan adigu gacanta ugu hayso, garsooraha ayaa kugu amri kara inaad lacag uga soo celiso akoonkaaga dibedda. Haddii nin dharka khafiifka ah ee haysta muusiga uu amar siinayo, wuxuu kugu qasbi karaa inaad sidaas yeeshid.
Ka ilaalinta dacwadaha miyay muhiim u tahay adiga? Hadday sidaas tahay, hayntu waxay ku haysaa akoonka xafis ilaalin hantiyeed oo laga leeyahay wakiil wakiil shati leh. Taasi waa, lacag ku hay gudaha aaminkaaga, oo uu ilaaliyo shati shati leh, caymis, ammaane aamin ah wakiil. Tani waa sababta oo ah marka aad sidaas sameyso waxaad jeceshahay miisaska. Ammaano hayaha wuxuu deggan yahay xeebaha. Sidaa darteed, garsooraha maxalliga ahi awood uma leh in uu ku amro wakiilka shisheeyaha inuu adeeco.
Faa'iidooyin ayaa jira marka lagu daro kordhinta asturnaanta. Xisaabaadka bangiga ee dibedda ayaa sidoo kale bixiya xaddiga xorriyadda marka loo eego xisaabaadka bangiga gudaha. Xisaabaadka guryaha ayaa laga yaabaa inay kaa mamnuuceen inaad ku lug yeelato qaar ka mid ah adeegyada maaraynta hantida. Laakiin bangiyo badan oo xeebaha ka baxsan ayaa furi kara fursadahahan dhaqaale ee faa’iidada badan iyo faa'iidada leh. Waxaa jira hal sabab oo ah fursadaha maalgashi ee ay heli karaan baananka shisheeye iyo macaamiishooda. Sababtoo ah waxaa jira faragelin dowladeed oo aad u yar oo ku saabsan arrimaha bangiyada dhowr gobol.
Adigoo adeegsanaya koontada bangi ee dibedda waxaad ku raaxeysan kartaa faa iidooyinka ka faa’iideysiga lacagaha caalamiga ah. Waxaad ku sameyn kartaa sidaas lacagaha kala duwan. Intaas waxaa sii dheer waxaad heli kartaa sicirka sarrifka si ka wanaagsan lacagahaas. Haysashada koontada bangi ee dibedda waxaa laga furaa fursado ganacsi oo aan laga heli karin maamullada qaarkood. Marka, bangiyo dibedda waxay u oggolaaneysaa maalgashi sahlan suuqyada soo koraya iyo waddamada soo koraya. Tani waxay inta badan u oggolaaneysaa maal-gashadeyaasha inay ku helaan soo laabasho ka wanaagsan maal-gashikooda halkii ay ka heli lahaayeen gudaha. Waxaa jira maalgashi dheeri ah iyo fursado ganacsi qaar ka mid ah koontada bangiyeedka. Tani waxay ku lug yeelan kartaa haysashada boortofooliyada saamiyada iyo / ama biraha qaaliga ah. Intaas waxaa sii dheer, inbadan oo jeer waxaa jira qiime dulsaar dheeri ah oo ay ku deeqaan kuwa akoonkooda haystay.
Waa maxay badbaadada? Bangiyada Mareykanka ama Bankiyada Dhexe?
Faa'iidooyin kale oo ka timaadda lahaanshaha akoon bangi ee dibedda waa in dhulal badan oo bangiyadu aad u deggan yihiin. Hadda waan ogahay waxaad u maleynaysid inaad hadda ka fikireyso: "Sidee taasi u suurtogal tahay?" Xaqiiqda cad ee arintu waxay tahay in inta u dhaxaysa 2008 iyo 2012, ay jireen bangiyo 465 Mareykan ah oo ku guuldaraystay. Intaa waxaa dheer, falanqayn qoto-dheer oo sanadeedkii ugu dambeeyay ee ay sameysay Global Finance ayaa tan heshay. Ee Bangiyada ugu ammaansan adduunka ee 50 kaliya seddex (3) bangiyada Mareykanka ayaa sameeyay liiska. Xitaa xitaa ma jirin hal bangi Mareykan ah oo ku jira bangiyada ugu sarreeya ee xNUMX ugu ammaansan. Midna ma aha. Sida ku xusan liiskaan, bangiyada ugu sarreeya ee xNUMX ugu ammaansan adduunka ayaa dhammaantood ku yaal Yurub.
Hada tani looma jeedo in warshadaha bangiyada Mareykanka ay qarka u saaran yihiin imaatin. Taasi micnaheedu waa, jahwareer dhaqaale maahan daruuri inay tahay dariiqa geeska. Tirakoobyadan ayaa si fudud u muujinaya inay jiraan dalal badaha ka baxsan oo bixiya xasillooni bankiyo ka badan tan Mareykanka. Tan inta badan waxaa loo maraa xeerarka bangiga ee u baahan xaashiyaha isu dheellitirka xoogan. Intaas waxaa sii dheer inbadan oo ka mid ah machadyadaan waxay bixiyaan soo celinta si ka wanaagsan sidii ay ula xisaabtameen kuwa isla xisaabtama waxayna siinayaan maal gelin ballaaran. Heerka xasilloonida ayaa u oggolaanaya akoontada akoonnada inay kala duwanaadaan hantidooda. Waxay sidoo kale siineysaa fursad ay sifiican ugu ilaashadaan hantidaas ayna ilaashadaan asturnaanta maaliyadeed.
Bankiga Dhexe ee Dhibaatada
Ugu dambeyntiina, dadka badankood waxay leeyihiin fikradda ah in helitaanka akoon bangi meel ka baxsan uu yahay mid dheer, adag, iyo geedi socod dhib badan. Waxay u maleynayaan in loo hayey kaliya kuwa yar; loogu talagalay kuwa awood u leh inay bixiyaan qareenno qaali ah iyo ajuuro si ay u aasaasaan akoonno meel ka baxsan ah. Tani waxaa laga yaabaa inay run tahay toban sano kahor markii la aasaasay akoonnada bangiyo shisheeye aad bay u dhib badnaayeen. Intaa waxaa sii dheer, waxay ahaayeen qaali sababtoo ah baahida loo qabo in loo safro bangiga. Laakiin waxaa yimid dhalashada da'da dhijitaalka ah iyo adeegsiga kumbuyuutarrada ku xiran internetka. Marka, maanta, helitaanka iyo la socoshada akoonnada bangiyo shisheeye waxay u dhowdahay inay fududaato ka shaqeynta xisaabaadka bangiga gudaha.
Maalintani iyo da 'kasta oo ku saabsan qof kasta oo qaangaar ah ayaa dalban kara koonto bangi oo ka baxsan. Waa arin fudud in lala xiriiro qof wax barto sida ururkayaga. Internetka ayaa meesha ka saaray gaar ahaanta akoonnada bangiyo shisheeye. Waxay sidaas u abuurtay jawi qofkasta codsan karo. Kaliya qofkasta wuu ilaalin karaa akoonkiisa isagoon bixin lacag qaanuun iyo sharci u qaadis qareen. Intaas waxaa sii dheer ma jiro shuruudo lagu doonayo in lagu safro meesha ay ku taal bannaanka dibedda ee maamullo badan. Howlaha ay bangiyo bananka ka bixiyaan ayaa hada ah kuwo sifiican looga heli karo qofkasta. Sidaa darteed, way fududahay in la dalbado koonto bangi oo dibedda laga soo goosto isla markaana la goosto waxtarka inta la moodayo.
Bangiyo Dibadeed: Adigaa adiga loogu talagalay?
Xisaabaadka bangiga ee dibedda waxaa ku hareereysan waxyaabo badan oo mystique ah labaatankii sano ee la soo dhaafay. Qofka isku celceliska ahi wuxuu aaminsan yahay in bangiyadu u keydiyaan waxtarkan kaliya shakhsiyaadka ugu taajirsan. Sidaas oo ay tahay, waxay garteen in faa'iidooyinka ka imaan kara oo keliya ay leeyihiin ninka kale. Taasi waa hal aaminaad in aan ku faraxsanahay in dowladnimadu ayan run ahayn. Sidookale faa iidooyin ayaa kuu leh.
Faa'iidooyinka asturnaanta, ilaalinta hantida, xasilloonida hay'ad, iyo dabacsanaan xagga bangiyada xeebaha ayaa qof kasta heli kara. Ma waxaad tahay milkiile ganacsi oo raadinaya inuu ilaaliyo hantidiisa ganacsi? Ma tahay qof doonaya inuu galo fursado maalgashi qaali ah suuqyada dibedda? Hadday sidaas tahay, khubaro badan oo ilaaliya hantida ayaa si adag u soo jeedinaya in la raadiyo helitaanka koonto bangi oo ka baxsan.
Bankiga Dhexe ee Badbaadinta iyo Ammaanka
Bangiyada sirta iyo nabadgelyada ayaa ah walaac weyn. Waa mudnaan in adiga iyo lacagtaadu nabadqabtaan. OffshoreCompany.com waxay si joogto ah ugu talineysaa hay'adaha bangiyada ee ka qeyb qaata nidaamka bangiyada dhexe. Nidaamka si aad ah ayaa loo habeeyay. Waxay fulineysaa dhaqangelinta hab xisaabeedyo adag, oo siiya kaabayaal xoog leh iyo kormeer madax-bannaan oo lagu sameeyo baananka ka baxsan xeebaha.
Hay'ado badan ayaa siiya koonto aamin ah iyo mid gaar ahaaneed bangiyo shirkadaha waaweyn ee Mareykanka iyo shisheeyaha iyo mas'uuliyiinta dowladda hoose. Machadyadu waxay bixiyaan shaqo waxayna taageeraan dhaqaalaha gudaha. Taasi waa, dhaqaalahooda waxay kuxiran yihiin qaybta adeegyada maaliyadeed. Sidaas darteed, shuruucda amniga iyo asturnaanta dhaqaale waa mid dheer oo deggan. Waa muhiim in dhammaan macaamiisha mustaqbalka inay doortaan go'aanka saxda ah ee xukunka. Waxaan ku samaynaa baaritaan ballaaran sidii ay ku bixiyeen qaar badan oo ka mid ah bixiyeyaasha xisaabta bangi ee ugu sarreeya. Intaa waxaa sii dheer, waxaan ku faraxsanahay inaan ku siino macluumaad waxtar leh oo kaa caawinaya samaynta doorashada habboon.
Baananka shisheeyaha ee waddamada qaarkood waxay ka qeybgalaan nidaamyada caymiska ilaalinta maaliyadeed ee waajibka ah. Waxay u qaataan amniga iyo asturnaanta si dhab ah. Garsoorayaasha si adag ayey u dhaqan geliyaan nabadgeliyada bannaanka. Waxay si adag u xoojinayaan qawaaniinta. Taasi waa, sharciga ayaa xaddidaya bangiyada macluumaadka ee lala wadaago qeybaha saddexaad, oo ay ku jiraan dowlado shisheeye. Caadi ahaan, sharciyadu waxay oggol yihiin bixiyeyaasha akoonka bannaanka inay la wadaagaan macluumaadka kiisaska fal dembiyeed culus ama argaggixisannimo. Si qarsoodi ah uma qaataan asturnaanta bangiyada.
Kharashka Bankiga Swiss
Tusaale ahaan Switzerland gudaheeda, sharcigu wuxuu ciqaab adag u ciqaabayaa shaqaale kasta oo ku xadgudba sirta macaamiisha. Tan waxaa ku jira ganaaxyo adag iyo waqti xabsi. Marka, waxay si gaar ah u qaataan sirta khaaska ah. Sidoo kale waa muhiim in bangiga ajnabiga uusan laheyn laan guri. Tan waxaa ugu wacan waaxda laanta guryaha ayaa lagu qaadi karaa ganaax ilaa laanta shisheeye ay qufacdo lacagta. Waa kuwee bangiyada ugu wanaagsan iskudarka amniga, amniga, gelitaanka khadka tooska ah ee aqbala macaamiisha shisheeyaha ah? Halkaas ayay shirkad sidan oo kale ahi ku soo galay. U isticmaal lambarka ama foomka ku yaal boggan caawimaad.
Waa kuwan qaar ka mid ah xudduudaha kuwaas oo ah xarumo maaliyadeed oo gaar ah:
Jasiiradaha Channel (Jersey iyo Guernsey)
Turkiga oo Caicos Islands
OffshoreCompany.com Waxay sameysay cilaaqaad dheer oo dhexmara bangiyadaha xeebaha. Waxaan qabannaa dib u eegisyo joogto ah, dadaal ku habboon iyo kulanno shaqsiyeed. In sidaa la yeelo waxay gacan ka geysaneysaa in la hubiyo in akoonnada bangi ee dibedda ee aan ka caawinno macaamiisha inay aasaasaan ay u badan tahay inay amaan iyo xasillooni leeyihiin. Nagala soo xiriir si aad u hesho macluumaad dheeri ah ama aad akoon uga furato bangi aamin ah oo xeebta ku yaal.
<Illaa cutubka 4
Ilaa cutubka 6>